Giraanta Dareenka Magnet – Soomaali – Get up to 50% off when you buy multiple small stickers.
Giraanta Dareenka Magnet – Soomaali
Ifafaalaha soo jeedinta korantada. Sharciga Faraday – Somali
Ifafaalaha soo-saarka elektromagnetic-ka waxaa daahfuray Michael Faraday iyo Joseph Henry, natiijadii tijaabadii ugu horreysay ee muujinaysa ifafaalaha soo-saarka korantada waxaa daabacay 1931-kii Faraday. Ifafaalaha soo-saarka korantada (electromagnetic induction) wuxuu ka kooban yahay muuqaalka korantada korantada ee la kiciyay iyo hadda la kiciyay ee wareeg ah oo ay ka gudubtay qulqulka birlabeedka waqtiga-kala duwan. Tijaabo fudud oo muujinaysa ifafaale ayaa lagu muujiyay Jaantuska 1. Waxaan leenahay gariiradda terminal-ka kaas oo aan ku xirno milliammeter samaynta wareeg xiran. Waxaan keenaynaa magnet agagaarka wareeggan. Haddii magnetku nasasho ku jiro, ammeter-ku ma tilmaamayo wax hadda jira. Haddi magnetka hore iyo gadaal loo dhaqaajiyo inta u dhaxaysa gariiradda waxay rogtaa irbadda ammeter-ku way leexataa taasoo tusinaysa joogitaanka wareegga gariiradda hadda jirta oo la yiraahdo induced current taasoo tusinaysa in nidaamkani (coil + magnet) uu u dhaqmo sida koronto dhaliyaha, koronto-dhaliyaha muuqda oo loo yaqaan matoor koronto oo danab ah.
A. Magnet ee nasashada
B. Magnet oo bidix u dhaqaaqaysa
C. Magnet oo u dhaqaaqaysa dhanka midig
Jihada hadda la kiciyay waxay la xiriirtaa dhaqdhaqaaqa magnetka iyo sida tiirarka magnetka ay ugu jihaysan yihiin gariiradda. Xeerka go’aamiya jihada hadda la kiciyay iyo tamarta korantada ee la kiciyay waxaa la yiraahdaa xeerka Lenz waxaana lagu yiri sidan soo socota: tamarta korantada ee la kiciyay iyo hadda la kiciyay waxay leeyihiin dareen ah inay ka soo horjeedaan kala duwanaanshaha goobta magnetic inductive (taas oo ah sababta dhacdada). Codsiga sharciga Lenz ee tijaabada lagu sifeeyay Jaantuska 1 ayaa hoos lagu sawiray. Jaantuska 2 magnet-ku wuxuu la galaa tiirka N inta u dhaxaysa wareegyada gariiradda. Inductor-ka magnetic inductive B waxa uu u janjeedha dhanka bidix wuxuuna sababaa qulqulka sii kordhaya ee gariiradda. Marka loo eego qaanuunka Lenz, magnetic field B ee la kiciyay waa inuu keenaa qulqulo ka soo horjeeda kororkaan, ie inuu noqdo jihada ka soo horjeeda inductive B. Sidaa darteed, hadda la soo jiiday ee gariiradda waa in uu lahaadaa jihadaas oo keenta in B la kiciyay uu ka soo horjeesto korodhka inductor B.
Magnet-ka ayaa galaya
Giraanta Dareenka Magnet LIISKA EREYADA
Welwelsan, Naafeeyey, Baqdin, Argagax, Naxdin, Naxdin, Naxdin, Yaab, Yaab, Xushmad, Hamuun, Tamar, Xorayn, Farxad, Maaweelo, Ciyaar, FURAN, Niyad-jabsan, DAN-GELIN, HOOS U NACAYN, KALA FOOLEYN. NALAAL, AWOOD LA’AAN, DHIBAATEYN, LA AQOONSIIN, CAYN AHAYN, LA SAAREYNAYN, LUGHAYAYNAYN, NACAYB LAGU SOO NOQDAY, CARDOON, CAROOD, CADHO AH, KABABAY, CADHAY, CADHO, KHALDAN, CAYN , XAASID , CANAAQ LI’AAN, KHILAAF LA’AAN Farxad, Farxad, Xiise, Kibir, Qirran, Xoog badan, Nabad, Saaxiibtinimo, Rajo wanaagsan, caajis ah, Dheer, Niyad-jab, quus ah, laga tagay, Dambiilayaal, Ka fogaansho, Argagax, Niyad-jab, Diidmo, Ceyriin, Taas, La Hanjabey, la dhaawacay, SARIIR, LA DIIDAY, MAWDUUCA, AAN LA hubsan, dulqaad la’aan, cabsi, baqdin, yaab, faraxsan, murugo, nacayb, xanaaqsan
sticker iib ah giraanta Dareenka Magnet
Tags: AAN LA hubsanArgagaxAWOOD LA’AANBaqdincaajis ahcabsiCADHAYCADHOCADHO AHCANAAQ LI’AANCARDOONCAROODCAYNCAYN AHAYNCeyriinCiyaarDambiilayaalDAN-GELINDheerDHIBAATEYNDiidmodulqaad la'aanfaraxsanFarxadFURANHamuunHOOS U NACAYNKa fogaanshoKABABAYKALA FOOLEYN. NALAALKHALDANKHILAAF LA’AAN FarxadKibirLA AQOONSIINla dhaawacayLA DIIDAYLa HanjabeyLA SAAREYNAYNlaga tagayLUGHAYAYNAYNMaaweeloMAWDUUCAmurugoNaafeeyeyNabadnacaybNACAYB LAGU SOO NOQDAYNaxdinNiyad-jabNiyad-jabsanQirranquus ahRajo wanaagsanSaaxiibtinimoSARIIRTaasTamarWelwelsanXAASIDxanaaqsanXiiseXoog badanXoraynXushmadYaab
May 23, 2022 by admin Somalia - Soomaaliya 0
Japonsko: zemětřesení, tsunami a jaderná havárie
Next Rueda de Emociones Imán – Español
Previous Magnet za kolo čustev – Slovenščina